Nangona kubonakala kubonakala, akukho mpendulo enye, elula. Nazi ezinye zeengcamango eziqhelekileyo kunye nokufutshane kwazo. Ukulandela oku kukhangelelwa yintoni abantu abayilandelayo kunye neengqondo ze-psychologist / i-psychoanalyst ithatha ixesha elibhekiselele kulo. Ekugqibeleni, kukho inkcazo yokusebenza onokuyifumana incedo.
Ukuba KuyiNdaba Eyodwa, Ingaba Yingqungquthela
Wonke umntu uyazi ukuba yintoni inkolelo, akunene? Ibali elinama-centaurs, iihagu ezindizayo okanye amahashe, okanye uhambo lokubuyela kwiLizwe labafileyo okanye ngaphantsi komhlaba.
Ukuhlanganiswa kwe-Classic ye-myths kubandakanya i-Bulfinch's Tales From Mythology kunye neGroses eyaziwa ngeGreek Mythology, nguCharles J. Kingsley.
"Ngokucacileyo," unokuthi, inkolelo yinto ekhohlakeleyo akukho mntu ukholelwa ngokwenene. Mhlawumbi ngethuba elithile, elidala, kukho abantu abanengqondo ngokwaneleyo ukuba bakholwe kuwo, kodwa ngoku siyazi kakuhle.
Kwenene? Xa uqala ukukhangela ngenyameko kuloo nto ebizwa ngokuba yintsimi, iyahlukana. Cinga ngeenkolelo zakho ezithembekileyo.
Mhlawumbi ukholelwa ukuba unkulunkulu uthetha kwindoda ebusayo (ibali likaMoses kwiBhayibhile yesiHebhere). Mhlawumbi wenza ummangaliso ukwenza isonka esincinci sondla isihlwele (iTestamente Elisha).
Ungayivakalelwa njani xa umntu ebhalela ngeengcali? Uyakwazi ukuphikisana - kwaye ukhuseleke kakhulu - ayilona inkolelo. Unokuvuma ukuba awukwazi ukubakhombisa kubo abangakholwayo, kodwa amabali awanalo nje ngento enjengeengcali (kuthiwa ngamathoni abonisa ukungahambisani).
Ukukhanyela ngokunyanisekileyo akubonakali ngenye indlela ukuba into okanye ayiyiyo inkolelo, kodwa unokuba ulungile.
Ibali lebhokisi likaPandora kuthiwa liyingcali, kodwa yintoni eyenza loo nto ihluke kuyo:
Ibali leBhayibhile njengesiTyeya sikaNowa, oko kungacatshangwanga njengengqina lomYuda okanye umKristu.
Umzekeliso, njengomzekeliso wase-Atlantis, okhuseleka ngamandla njengengengoma-bomi ngabo ba kholelwa kuAtlantis.
Kuthiwani ngomlando kaRobin Hood okanye uKumkani Arthur?
Nangona imbali engavunyelwanga malunga nokuxhoma komthi womngcwabo ngeGeorge Washington inokuthi inyaniso ingaba yinkolelo.
Igama leengcali lisetyenziswe kwiimeko ezininzi, kodwa kubonakala kungenanto enye. Xa uxubusha inkolelo kunye nabanye, kufuneka uqikelele ukuba bathetha ntoni ukuze ube nesalathiso esifanayo kunye nokuphepha ukuphazamisa iimvakalelo zomntu (ngaphandle koko, awukhathalele).
Inkolelo Ingaba Inxalenye Yenkolo Awuyikholelwayo
Nantsi indlela ifilosofi kunye nesifo sengqondo uJames Kern Feiblemanone ichaza inkolelo: Inkolo engakholelwa kuyo.
Iyintoni inkolelo yeqela elinye inyaniso kunye nenxalenye yesazisi yenkcubeko kwenye. Iingoma zibali ezabelwana liqela, eziyingxenye yeso sazisi senkcubeko-njengezithethe zentsapho.
Uninzi lweentsapho luyakucasulwa ukuva amabali abo achazwa njengeengcali (okanye ubuxoki kunye neendalana ezinde, mhlawumbi zifanane nazo ezingcono kunenganekwane kuba intsapho ngokuqhelekileyo ibonwa njengincinci kuneqela lenkcubeko). Inkolelo ingasetyenziselwa njengesigama esichasene nenkolo yonqulo edekisiwe okanye, njengoko isicatshulwa ngasentla sithetha, inkolo apho kungekho mntu ukholelwa khona.
Iingcali zichaza intsomi
Ukubeka ixabiso kwiingcali akuncedi imiba. Iinkcazo ezingenanto ezichanekileyo kunye neempembelelo ezintle zengxelo yeengcali aziyizichazi kwaye azichazi kakhulu. Abaninzi baye bazama ukuchaza intsomi, ngokuphumelela kuphela. Makhe sibone uluhlu lweenkcazo ezivela kwiingcali zefilosofi, i-psychoanalyst, kunye nabanye abacinga ukuba babone indlela eyinkimbinkimbi ngayo inkolelo yesiganeko ebonakalayo elula kukuba:
Iingoma zidla ngokuba ngamabali emvelaphi, indlela ihlabathi kunye nayo yonke into ekhona kuyo kwi-illo tempore. - Eliade.
Ngamanye amaxesha iinkolelo zikarhulumente eziphuphayo, ezifana nokuphupha kwamaphupha abucala, ezivela engqondweni engqondweni. - Freud.
Enyanisweni, iimbazi zivame ukutyhila i-archetypes ye-collective consciousness. - Jung.
Intsomi ye-Myths ukuya kwi-dimensional dimension, ichaza imvelaphi kunye nemvelo ye-cosmos, iqinisekise imiba yoluntu, kwaye, kwi-psychological plane, idilesi ngokwabo kwi-deep-heart psyche. - Campbell.
Ezinye iinkolelo zichazwa, zizama ukuzama ukutshintsha ihlabathi lemvelo. - Frazer.
Inkolelo zezenkolo ziyimbali engcwele. - Eliade.
Iingoma zibini kunye noluntu kwintlalo, kodwa ziibali zokuqala kunye eziphambili. - Kirk.
I-Useful Use of Definition of Myth
Ukususela kwiingcaciso ezifundwe ngasentla, sinokubona ukuba iimbali zibalulekile. Mhlawumbi abantu bayakholelwa. Mhlawumbi a ba Inyaniso yabo ibaluleke kakhulu. Ukusondela, kodwa kungekhona ukufikelela kwaneleyo, inkcazo ecacileyo yenkolelo yile:
"Iingcamango zibalwa ngabantu ngabantu: apho bavela khona, indlela abaphatha ngayo iintlekele ezinkulu, indlela abajamelana ngayo nento ekufuneka bayenze ngayo nokuthi yonke into iya kugqiba njani. Ukuba oko akuyinto yonke into ekhona?"
Inkolo Yokuqala KwaseMesopotamiya Yasendulo
Amazwe aneNqanaba elikhuselekileyo lokukhulelwa kunye neNtlawulo zokuzalwa
Iindlela ezi-4 zokuLungisa iiMidlalo
Phezulu Richard Marx Iingoma zee-80s
Imidwebo yamaGrike namaGrike kunye noodadekazi